Umphakathi ubuyele emsebenzini kwaSithebe | News24
Umphakathi ubuyele emsebenzini kwaSithebe
Usihlalo we-ANC Greater KwaDukuza uMnuz Ricardo Mthembu kwaSithebe ngoLwesihlanu oledlule. x
NGOMSOMBULUKO, ngomhlaka 14 kuNdasa (March), akubanga khona mbiko yodlame nokubikisha endaweni yakwaSithebe emva kokuthi ubuholi benhlangano kaKhongolose bukwaze ukunqanda isimo ngoLwesihlanu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, u-Major Thulani Zwane uthe: “Amaphoyisa awakatholi mbiko namhlanje [ngoMsombuluko]. Abasolwa ababoshelwe udlame ngeledlule bavela enkantolo yeMantshi yaseMtunzini ngomhlaka 9 kuNdasa, icala lahlehliselwa umhlaka 15 kuNdasa,” kusho yena.
Okhulumela amaphoyisa aseSundumbili, u-Lieutenant Gideon Mthethwa uthe amaphoyisa abasebenzela kwaSithebe ngoMsombuluko ukuqinisekisa ukuthi udlame aluqali phansi ngenkathi abantu bebuyela emsebenzini.
Ngeledlule kuboshwe abantu abanga phezulu kuka-100 ngamacala okudala udlame emphakathini endaweni yakwaSithebe, eMandeni.
Baboshwa ngenkathi umphakathi ubhikisha ushisa amaloli ayisithupha nezimboni waphinde wavala imigwaqo.
Ababhikishi babe khononda ngokubekwa kuka Mnuz Lawrence Magwaza njenge mbangi yokuba yikhansela.
NgoLwesihlanu, okhulumela umphakathi, uMnuz Mafa Khanyile unxuse umphakathi obuhlanganyele ezinkundleni zemidlalo ukuba unikeze abaholi ithuba lokuthi bethule izinkulumo zabo ukuze bezophendula izimfuno zomphakathi.
Lokhu ukusho ngoba ngoLwesithathu oledlule kuphazamiseke umhlangano obekumele ubephakathi kwabaholi nomphakathi ngenkathi umphakathi ufuna kukhululwe labo ababoshelwa udlame ngaphambi kokuthi izinxonxo ziqhubeke.
Uthe labo ababoshelwa udlame banikeza amaphoyisa imininigwane okungesiyona okudale ukuthi ukukhululwa kwabo kuthathe isikhathi esengeziwe.
Ekhuluma nabezindaba, uMnuz Khanyile uthe izikhalo umphakathi onazo ngoMnuz Lawrence Magwaza ukuthi ngesikhathi esayiMeya yaseMandeni akakwazanga ukwenza umsebenzi wakhe ngendlela efanele.
Uthe ezinye izikhalo umphakathi obunazo zimayelana nomtholampilo wakwaSithebe. Uthe umphakathi ukhala ngokuthi abasebenzi ngedlela egculisayo abahlengikazi bakulo mtholampilo kanti futhi ushodelwa yimithi.
Uqhube wathi okunye umphakathi obukhala ngakho ukuthi izimboni zakwaSithebe azibaqashi abantu bendawo kanti futhi labo abaqashiwe baholelwa imali encane.
Okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal, uMnuz Mdumiseni Ntuli uthe ubuholi buthathe isinqumo sokuthi uMnuz Magwaza uzosuswa esikhundleni sakhe ngenxa yezikhalo eziphakanyiswe umphakathi.
Uthe inhlangano izibophezele ekusebenzeni nomphakathi ukuthola isixhazululo kulolu daba.
Oyilungu le-ANC PEC uMnuz Mxolisi Kaunda uthe osomabhizinisi bathembisile ukuthi angeke bezivale izimboni zabo kwaSithebe kodwa bazoqhubeka nokusebenzela kule ndawo.
Uthe ubuholi behlangano kaKhongolose buxoxisane noNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uDokotela Sbongiseni Dhlomo ngezikhalo eziphakanyiswe umphakathi ngomtholampilo wakwaSithebe.
USihlalo we-ANC Greater KwaDukuza, uMnuz Ricardo Mthembu uthe ubuholi benhlangano buxoxisane ne-Cosatu mayelana nokuthi abasebenzi banelungelo lokuhlanganyela nezinyunyana.
NgoMsombuluko iMeya yaseMandeni, uMnuz Siphesihle Zulu uthe indawo yakwaSithebe ibuyele esimeni esijwayelekile njengoba abantu bebeya emsebenzini.
Uthe kuzoba khona isu lokuthola ukuthi umonakalo odalekile nesikhathi esilahlekile ngeledlule kuzokhokhwa kanjani.